प्रधानमन्त्री र मन्त्रीद्वारा सम्पत्ति गोप्य राख्ने प्रयास, सार्वजनिक गर्न को–को बाँकी ? - Deshko News Deshko News प्रधानमन्त्री र मन्त्रीद्वारा सम्पत्ति गोप्य राख्ने प्रयास, सार्वजनिक गर्न को–को बाँकी ? - Deshko News
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीद्वारा सम्पत्ति गोप्य राख्ने प्रयास, सार्वजनिक गर्न को–को बाँकी ?
तीन महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा र उनका मन्त्रिमण्डलका सदस्यमाथि नैतिकता र सदाचारका विषयमा प्रश्न सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति गोप्य राख्ने प्रयास गरेको पाइएको छ । आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकको निर्णय गर्नुपर्नेमा हालसम्म त्यस्तो निर्णय हुन नसकेकाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन नसकेको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए । उनले केही मन्त्री र सबै राज्यमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण आउन भने बाँकी नै रहेको बताए । हाल ५० जनाको जम्बो मन्त्रिपरिषद् छ ।